Susa iribhoni kwi-AutoCAD 2009? -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Susa i-Ribbon ngo-AutoCAD 2009?
Susa i-Ribbon ngo-AutoCAD 2009?
Abasebenzisi abaninzi abanokulinda abaninzi abazange bathande ukuyila kwamamenyu e-Ribbon-style AutoCAD 2009, kodwa ukukhaba akubalulekanga kangako. Yingxaki kuphela yokuphazamiseka kwengqondo, kanye njengokuba sisebenza kwitafile yomnye umntu, ukuba izixhobo ezisisiseko zazingekho kwisiphazamiso esifanayo nesethu. Kwenzekile ngo-Ofisi ka-2007 kwaye ngoku sine-AutoCAD, asonwabanga ukuba indawo ekumenyu ithatha ixesha ukusebenzisa imiyalelo rhoqo kwaye njengoko i-AutoDesk ingabuyeli emva kule ndlela, kuyakufuneka uyiqhelane nayo.
Ngokuqinisekileyo iiNgesi blogs zibhale kakhulu, kwaye i-AutoCAD 2009 incwadana kufuneka ithi amawaka angamaqhinga okusebenzisa i-design entsha, kule ngxaki ndiya kukunika iingcebiso zokuphila ngeRibhoni, njengoko ndenze.
0. Ukusetyenziswa kwiRibhoni
Esi sesokuqala, sinyanzelwe ukuba sitshintshe kuba izizukulwana ezizayo ziya kuyibona ngaloo ndlela. Iincwadana ziya kuza ngale ndlela kwaye njengoko kwakunzima kuthi ukusuka kwimiyalelo yokubhaliweyo kwimenyu esecaleni ye-AutoCAD R12, esi siselo kufuneka sithathwe kwakamsinya okanye kamva.
Eyona nto inokuza kukuba i-AutoCAD 2011 izisa ukhetho lokwenza ujongano lubonakale njengo-2008. Kodwa ungabi nethemba eliphezulu.
Akulunganga ukuba ibekwe ngokukhawuleza, iyafana umsebenzi wokuhamba iphumeze iMicrostation kuhlobo lweV8i. Ukwenza oku kuya kufuneka unike iqhosha lasekunene le mouse, khetha ukhetho "Vula"Bese uyidonsela kumgama osekhohlo.
1. Fihla iRibhoni
Ukufihla, kufuneka uthayiphe umyalelo "ibhokhwe”Kwaye inyamalale emehlweni. Ngokunjalo, unokucofa ekunene kwi-Ribbon bar kwaye ukhethe "ukuvala". Ukuba ufuna ukuyenza ibonakale kwakhona, bhala umyalelo "ibhendi".
Nangona akufuneki ukuyifihla ngokupheleleyo, ungasebenzisa ukhetho "ncitshiswe"Kwaye kuya kuba nebhaso elingenanto elingasichaphazeli kuthi emva kwexesha sinokufikelela kulo ukuhamba kwesine kwothando olufunayo.
2. Yenza imiyalelo yemivalo.
Ukuba sifihla okanye sinciphisa, siya kufuna iimfono ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo, ngenxa yoko kufuneka siye kwicala lasekhohlo kwaye senze iqhosha le mouse.
Ke kukhetho lwe-AutoCAD khetha imivalo yomdla wethu. Ngokwesiqhelo:
Kwaye i-voila, sele ikhangeleka ngathi indala. Lixesha lokuba usebenze.
Ukufikelela kwibar ye menu (ifayile, ukujonga, ifomathi ...) kuya kufuneka usebenze kwibala elibomvu lekhoneni.
Kwakhona kunokwenzeka ukwenza uqwalaselo, usebenzisa imigoqo yesiko, njengendlela yo I-25 imiyalelo esetyenziswayo, zonke ezi guqulwa zingagcinwa njengefayile .cui, kuba unokuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde
C: Amaxwebhu kunye noseto lweDatha yokuSebenzisa iAutodeskAutoCAD 2009R17.2enusupportacad.cui
Emva koko utshintsho lungagcinwa kwi-USB okanye i-imeyile ukuba ifake kwi-machine yethu yangaphandle.
Ingxaki 2: I-Acer Aspire One: I-Skype ayinxulumene
2015 auto uthi:
josé miguel uthi:
Molo, bendihlala ndisebenzisa i-Autocad iminyaka emininzi, kodwa ... eyona nto ndinayo lutshintsho olukhulu kwizikrini zokubonisa.
Ndiyilungiselele i-ribbon yam, endala. Ngoku, ndifuna ukuyihambisa kwelinye iqabane, kwenye i-PC. Ndicinga ukuba kuya kubakho indlela yokugcina ifayile kwaye uyakwazi ukuvula enye i-autocad ngokucwangciswa kwe-RIBBON entsha.
Ngaba unganinika isisombululo?
Kwaye ndivuyisela iphepha.
Sawubona, ndandisanda kufaka i-Autocad 2015, kwaye andinako ukuphelisa umkhondo wesimboli esishiywe yi-cursor xa ndihamba ngayo kwisikrini. Ndingayisusa njani?
bar Ribboon wahlulelwe akafundisi nje, kodwa Cima kwakhona ufake-kwakhona elivelayo AutoCAD kuncitshiswe andifuni q .. ayudaa aparesca ngakumbi ukususela ngoku enkosi ..
Jean Wolf uthi:
Kwandinceda kakhulu, ingakumbi kuba umyalelo othile ongaqhelekanga uvimba imenyu yebhondi, kwaye ndiyisebenzise ngoncedo lwakho
Ndingayisebenzisa njani ibha yam yomyalelo kwi-autocad 2011
kwi-2010 kunokwenzeka ukubeka imirhumo ye-lateral ukuze ihambelane ne-autocad 2008? Ndilandele amanyathelo akho kwaye andinakukwenza! nceda uncede
Siyabonga ngolwazi 🙂
Faka iphaneli yokulawula, faka / ukhupha iinkqubo kwaye uzame ukukhipha apho.
Molo, ndinengxaki kwaye kukuba ndikhuphe i-autocad 2009 kwaye ndicime zonke iifayile endizifumene kwinkqubo kwaye ngoku ndifuna ukuyifaka, ayindivumeli ukuba ndindixelele ukuba ifakiwe kwaye ungene ukuze usebenze kwaye Ndinike "regedit" kwaye ndicime zonke iifayile kodwa akukho nto ndincede
Siyabonga ngokubukela iTxus.
Abasebenzisi abasebenzisekileyo baya kusetshenziselwa utshintsho kwaye baya kuzuza kwi-tape.
Wow… Ndiyabona ukuba awuyithandi “iribhoni” okanye edla ngokubizwa ngokuba yiribhoni.
Ndicinga ukuba sisixhobo esiluncedo kakhulu, kwaye nje ngumbandela siqhelane nazo. Enyanisweni e 2010 (Civil 3D) bookmark us kuye kwaphuculwa ngenxa kanye into 3d yoluntu ezikhethiweyo efanelekileyo into, ezifana izixhobo umxholo menu eboniswayo.
Isishwankathelo, ukuba asizithandi iinguqulelo ezintsha kuba zithatha indawo yazo ezindala, ndiyazibuza ... Kutheni sizifaka? Kutheni ungashiyi uhlobo oluhle lwe-AutoCAD 14 ″ efakiweyo? 🙂
G!, amagama emiyalelo oyikhankanyileyo kufuneka uhlomle ukuba ayasebenza kwiinguqulelo zesiNgesi kuphela, okanye ngcono, amagama emiyalelo ngesiNgesi anombhalo ongezantsi "_" owandulelayo umyalelo osebenzayo kulo naluphi na ulwimi 💡
Ngokwam, ndisebenza zombini ujongano kwi-AutoCAD 2010. Kwelinye icala, ndiye ndiziqhelanise nale intsha, kwelinye, ndibhenela kwelakudala xa ndingasifumani isixhobo okanye ndingawukhumbuli umyalelo wayo. Ngokufanelekileyo, le ivela ngenxa ye-AutoCAD 2009 ibonakala ngathi kukusasazeka okunengqiqo.Imiyalelo eluncedo njengo "Lungelelanisa" ibekwe ngendlela engaqhelekanga
Siyabonga ngolwazi uFederico, nangona into eyona nto ifanelekileyo ukuzisebenzisa
Kwiveki ephelileyo kwetyala, zithathwe ukufaka AutoCAD Map 2010, kwaye phambi kokuba uqale ukunika ukhetho ukusebenzisa ujongano iRibhoni okanye sakudala, indawo elungileyo kwabo abakafuni ukukhuphisana ubuchwepheshe obutsha.